AKHRISO: M/weynihii hore ee Soomaaliya oo DF uga digay qorshe halis ah oo ay ku dhaqaaqday – Puntlandtimes
AKHRISO: M/weynihii hore ee Soomaaliya oo DF uga digay qorshe halis ah oo ay ku dhaqaaqday
September 23, 2017 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in Xukuumada hada jirta qaraarka ay ka qaadatay xiisada wadamada Khaliijka ay tahay mid aan wanaagsaneyn, oo saameyn ku yeelan karta Shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynihii hore ayaa sheegay in ay dalalka Sacuudiga, Imaaraatka, Masar iyo Baxreyn ay wax badan la qabteen Soomaaliya, gaar ahaana marka laga hadlayo arrimaha dhaqaalaha, Amniga iyo xariirka soo jireenka ah.
Sheekh Shariif wuxuu sheegay in aan la mahdin doonin go`aanka dhexdhexaadnimo ee sidda gaarka ah loogu leeyahay dawladda Qadar, oo uu sheegay in aysan waxba xariir ah iyo waxqabad ah kala dhaxeynin Soomaaliya.
War qoraal ah oo ku qoray bartiisa FACEBOOK-ga ayaa Shariif Sheekh Axmed sheegay in looga baahan yahay hay’addaha dawladda Faderaalku in ay dibu eegis ku sameeyaan qorshahan.
”Go’aanka xukuumadda Soomaaliya ay ka qaadatay arrimaha Khaliijka waxa uu iila muuqdaa mid lagu degdegay oo aan ka tarjumayn masaaliixda dalkeenna, waxaana shaki ku jirin in dalalka Sucuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxreyn oo aan la leenahay xiriir qoto dheer oo dhan siyaasadeed iyo mid ganacsiba leh aan loo burburin karin kaliya dowladda Qadar oo aan ognahay heerka ay ka taagan tahay taageerada dalkeenna.” ayaa lagu yiri qoraalkan.
Madaxweynihii hore wuxuu kulataliyey Madaxda dawladda Soomaaliya in ay dibu eegid ku sameeyaan qaraarka la gaaray, lana eego in ay ku jirto maslaxadda Ummadda Soomaaliyeed, iyadoo xooga la saarayo waqtigan hadda taagan iyo daruufaha Soomaalida.
”Waxaan madaxda dowladda kula talinayaa iney dib u eegis ku sameeyaan go’aankooda, islamarkaana ay wadatashiyo kala yeeshaan Golayaasha qaranka iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee dalka, ayna ilaaliyaan danaha istiraatiijiga ee aan la wadaagno dowladahaas” Ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.